Ny tena raharaha Haisiana Drive
Ningbo Hilectro Power Teknolojia Co., Ltd no tena raharaha Haïti Drive, izay manokana ny mpanamboatra ny herinaratra forklift, stacker, tontolo fiara, golfcart etc.The orinasa dia manaraka ny filozofia ny Haitiana Group "High Quality, sy ny fahaiza-miasa mahomby avo angovo famonjena ", ary mikendry manome ny tsara indrindra ao amin'ny kilasy ho an'ny mpividy entana.
Ny fampitomboana matotra sehatra ny Haisiana Vondrona
Niantehitra tamin'ny matotra sehatra fampandrosoana ny Haïti Group, Hilectro Power Teknolojia manana ny tena lasa controller.professional maotera ekipa orinasa mpamokatra entana, taratasy Lagre vy sy sary hoso-doko workshop.At izany fotoana izany, ny orinasa manatanteraka ny ISO: 9001 toetra ny rafitra fitantanana strictiy, pursuiting fanatsarana ny kalitao foana.
Ny orinasa no misy ao amin'ny orinasa Zone ny Beilun izay iray amin'ireo seranana lehibe indrindra manerana izao tontolo izao. Ny faritra ny orinasa 110 no nandrakotra thous toradroa meters.Equipped amin'ny famokarana maro andalana izay fahafahana isan-taona dia mihoatra ny 10 thous milentika ny forklifts, ny orinasa manana ny mandroso fitsirihana foibe tamin'izany andro izany.
High quality R & D ekipa
Nivory tamin'ny mpanara-maso ny asa, ny orinasa manana avo R & D farany ekipa. Amin'ny alalan'ny fanakambanana ny ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina traikefa, ny ekipa dia fanatsarana ny kalitaon'ny ny forklifts hatrany, ary tyring ho laharana an-tampon'ny mpamatsy ao amin'ny orinasa.